Mkpebi BOEING 737 MAX: Boeing rụpụtara ụgbọ elu adịghị mma
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Aviation » Mkpebi BOEING 737 MAX: Boeing rụpụtara ụgbọ elu adịghị mma
Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Etiopia Na -agbasa Akụkọ • Akụkọ kacha ọhụrụ na Indonesia • News • Tourism • Transportation • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akwụkwọ akụkọ USA
Kọmitii Houselọ USlọ Ọrụ US maka ationgbọ njem na-arịọ maka akwụkwọ mmepụta Boeing 787 na 737 MAX
Mkpebi Boeing na-anabata naanị ọrụ maka mkpọka 737 MAX, na-enweta nkwekọrịta na-ezere mmebi ntaramahụhụ.
Ikike akwụkwọ ozi na-eche na nke a ezughị ma kwuo na ha nwere ike ịga n'ihu na-alụ ọgụ.
Boeing na-anabata naanị ọrụ maka mkpọka 737 MAX, nweta nkwekọrịta na-ezere mmebi ntaramahụhụ.
Ndị ọka iwu Boeing gbara akwụkwọ mkpesa ụlọikpe na Wednesday na ndị ọka iwu maka ezinụlọ nke mmadụ 157 nwụrụ na mberede 737 MAX na Etiopia, na-anabata naanị ụgwọ maka ihe mberede na-egbu egbu na ịtọpụta usoro iji dozie ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nkwupụta niile.
Nkwekọrịta ikpe obodo a na-ewepụ nchọpụta na-eme ka ndị FlyersRights.org ịgba akwụkwọ bụ otu n'ime naanị ụzọ Akaụntụ na Eziokwu gbasara mkpọka MAX nwere ike nweta, yana nchekwa n'ọdịnihu iji gbochie ọnwụ a na-ezere n'ihi lax, enweghị ikike ma ọ bụ ime mkpebi nchekwa rụrụ arụ.
Ụzọ ndị ọzọ bụ mkpughe ndị na-agbapụta ọkụ, nyocha mpụ na usoro ikpe, nyocha nke Congressional site na iji ikike subpoena, na mmezigharị na Iwu nnwere onwe nke ozi.
The A ghọgburu FAA gosi ụgbọ elu.
Mkpebi Ụlọikpe Kasị Elu nke 2019 nke a maara dị ka Onye ndu Argus na-enye ohere ka ụlọ ọrụ ndị a na-achịkwa dị ka Boeing na ụlọ ọrụ nchekwa gọọmenti etiti dị ka FAA ka ha dobe mkpebi nchekwa ha na nzuzo na nchebe site n'aka ọkachamara nchekwa onwe onye ọ bụla ma ọ bụ nyocha ọha.
"Onye a na-azara ọnụ, Boeing, ekwenyela na ọ rụpụtara ụgbọ elu nwere ọnọdụ na-adịghị ize ndụ nke bụ ihe dị nso kpatara mmebi nkwụghachi ụgwọ nke onye gbara akwụkwọ kpatara ihe mberede ụgbọ elu Ethiopian Airlines Flight 302," ka ntinye akwụkwọ na-ekwu.
Boeing kwetara n'ụzọ doro anya na ọ bụghị ndị na-anya ụgbọelu ahụ emejọrọ.
O wepụrụ ndị na-eweta MAX abụọ: ụlọ ọrụ rụrụ akụkụ ihe mmetụta ọgụ jet na nke mepụtara, na nkọwapụta Boeing, sọftụwia njikwa ụgbọ elu ezighi ezi.
Mkpegharị ahụ gụnyere ihe a na-akpọ ụkpụrụ - nkwekọrịta na-adịgide adịgide na usoro mmezi - nke ndị niile bịanyere aka na ya ma e wezụga ezinụlọ abụọ.
Iwu a pụtara na a ga-ekpebi mmebi nkwụghachi ụgwọ maka onye ọ bụla n'otu n'otu ma ọ bụ n'ụlọ ikpe dị na Illinois, ebe Boeing bụ isi ụlọ ọrụ. Boeing kwetara ịghara ịgbalị ịmanye ezinụlọ ndị si mba ofesi, ọtụtụ n'ime ha nọ n'Africa, ịchọ mmebi na obodo ha, ebe mmebi ga-adị ntakịrị.
Na nkwupụta Wenezde, Boeing kwuru na nkwekọrịta a "na-enye ndị otu ahụ ohere itinye mgbalị ha n'ịchọpụta ụgwọ kwesịrị ekwesị maka ezinụlọ ọ bụla."
"Boeing na-agba mbọ ịhụ na ezinụlọ niile ndị ndị ha hụrụ n'anya nwụnahụrụ n'ihe mberede ahụ nwetara ụgwọ ọrụ zuru oke maka ọnwụ ha," nkwupụta ahụ gbakwụnyere.
Ihe Boeing na-enweta site na nkwekọrịta ahụ bụ mwepu doro anya nke nkwupụta ọ bụla maka mmebi ntaramahụhụ na njedebe nke usoro nchọpụta iwu ma ọ bụ nkwupụta nke ga-achọkwu akaebe nke mmejọ nke Boeing.
"Ndị juri agaghị anụ ihe akaebe n'okwu gbasara ibu," iwu ahụ kwuru. "Ndị otu ahụ kwenyere na ọ nweghị ihe akaebe ma ọ bụ arụmụka gbasara mmebi ntaramahụhụ ga-abụ isiokwu nke nchoputa ma ọ bụ kwenye."
Ralph Nader, onye na-akwado ndị ahịa ogologo oge a maara maka iji iwu mmekpa ahụ na-ejide ụlọ ọrụ na akaụntụ, kpọrọ ya "mkpebi dị ịtụnanya na-enweghị Boeing ga-ekwe nkwa dollar ọ bụla."
Nnabata Boeing nke ụgwọ bụ nke kacha nso na ọ bịarutere na nnabata zuru oke maka mkpọka MAX abụọ na-egbu egbu nke gburu mmadụ 346: Lion Air Flight JT 610 na Indonesia na 2018, ihe karịrị ọnwa anọ ka ihe mberede ahụ na Etiopia sochiri.
Otú ọ dị, ọ ka na-adaba na-agwa ụwa kpọmkwem ihe na-ezighị ezi na nhazi na asambodo nke MAX, otú o si mee na onye kpatara ya.
Ihe butere mkpọka MAX abụọ bụ ezighi ezi nke ngwa ngwa njikwa ụgbọ elu ọhụrụ na jet - Maneuvering Characteristics Augmentation System, ma ọ bụ MCAS - nke mere ka ụgbọ elu abụọ ahụ banye n'imi.
Ma ụlọ ọrụ ahụ anabataghị n'ihu ọha na imewe MCAS nwere nnukwu ntụpọ dị ka akwụkwọ ikike, ma e wezụga ikwu na ọ bụ imewe na ule kwesịrị iburu n'uche na nkà ndị na-anya ụgbọelu na oge mmeghachi omume pilot - usoro nke gosipụtara ụta ụfọdụ n'ebe ndị na-anya ụgbọelu nọ.
Boeing na-ekwu na ntinye akwụkwọ ahụ na ọ "anaghị ekwupụta mmejọ n'aka onye ọkwọ ụgbọ ala (Captain), Co-Pilot (Onye ọrụ mbụ) ma ọ bụ chọọ enyemaka ma ọ bụ nleghara anya atụnyere ha."
Nkwekọrịta ahụ kwuru na a ga-ahapụ ndị ọka iwu maka ezinaụlọ ka ha jiri nchoputa iwu nweta ihe dị ka data sitere na ndekọ ụgbọ elu. Nke ahụ ga-enye ha ohere ịmepụta ihe nkiri na-egosi ihe ndị njem ahụ nwetara n'ime nkeji isii nke ụgbọ elu ahụ iji gosi egwu na nhụjuanya nke ndị nwụrụ anwụ.
Agaghị ekpebi ụgwọ ego ikpeazụ maka Boeing ruo ọtụtụ ọnwa. Otú ọ dị, ókèala nke nkwekọrịta ahụ na-etinye na nkwupụta ahụ na-ewepụ njedebe nke ejighị n'aka na ụlọ ọrụ ahụ.
Site na ohere nke mkpughe ọzọ nke mmejọ n'ụlọ ikpe ugbu a dịpụrụ adịpụ, ndị isi Boeing nwere ike ịhapụ ya ndị ọka iwu ka ha rụpụta ụgwọ akwụ ụgwọ ziri ezi ka ha na-aga n'ihu.